Easy DVD Creator maka Beginners
> Resource> DVD> Easy DVD burner maka Beginners
Chọrọ ike DVD video ma ọ bụ DVD disk si video, oyiyi ma ọ bụ music faịlụ nke mere na ị na-ekiri ya na ihe ọ bụla n'ụlọ ọkpụkpọ DVD? Ọfọn, ọ bụghị ihe a ihe siri ike ma ọ bụrụ na ị jide a ọkachamara na mfe iji DVD eke software. Isiokwu a ga-egosi gị otú mfe ike DVD si niile ewu ọkọlọtọ na HD formats gụnyere AVI, MOV, MP4, TS, MTS, MKV, DV na ndị ọzọ. Ọbụna na ị oge mbụ ike DVD usoro na gị onwe gị. Niile ị chọrọ bụ a DVD Onye Okike software akpọ Wondershare DVD Onye Okike. Nke a bụ otu nke kasị mma ike DVD site na gị onwe gị, n'ezie mfe iji.
Na-agbalị nnọọ ya! Download a usoro na-eso n'okpuru nzọụkwụ ike gị DVD enweghị ihe ọ bụla hassle.
Cheta na: Nke a DVD onye bụ cross-n'elu ikpo okwu. Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, biko ịmụta Wondershare DVD Creator maka Mac, na-eme DVD tụsaara na Mac OS X (Mountain odum gụnyere). Nzọụkwụ bụ otu, dị nnọọ jide n'aka na ị ga-esi nri version.
1 Ibu Ibu video na / ma ọ bụ foto faịlụ n'ime mfe DVD onye
Iji tinye media faịlụ ka a mfe DVD burner. i nwere abụọ nhọrọ.
Ịdọrọ vidiyo ma ọ bụ foto direclty n'ime usoro ihe omume
Pịa "+" button ịnyagharịa gị faịlụ na nchekwa ma mbubata ha
All kwukwara faịlụ ga-egosi dị ka thumbnails ma jikota ọnụ na n'aka ekpe. Ị nwere ike pịa "↑" na "↓" button megharia iji. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikewapụ videos n'ime dị iche iche na ngalaba, ike utu aha ọzọ na ịdọrọ gị chọrọ clip n'ime ọzọ aha.
2 Dezie video faịlụ tụsaara (nhọrọ)
All nkịtị edits na-gụnyere ke a mfe DVD ọkụ software mere na ị pụrụ welie gị video ozugbo. Chetara video ma ọ bụ foto ị chọrọ dezie, na pịa pensụl na akara ngosi ka ịnweta edit window. Ị nwere ike mfe akuku, bugharia, ewepụtụ, tinye watermark ma ọ bụ ndepụta okwu iji nweta gị chọrọ mmetụta. Na ndị niile na mgbanwe ị na-mere ga-egosi na nri window maka ezigbo oge nyochaa.
3 Custom gị DVD menu (nhọrọ)
Iji mee ka gị na-eke personlized DVD ọbụna mfe, nke a DVD-ere ọkụ software na-agụnye 50+ njikere iji DVD ndebiri. Dị nnọọ pịa "NchNhr" button ịhọrọ a mmasị menu ịke, na mgbe ahụ hazie ya na gị ndabere image, music, item ọnọdụ, wdg
4 Malite mfe DVD e kere eke
Pịa "Preview" button iji jide n'aka na niile na-aga dị ka amasị gị. Biko obiọma kwuru na n'ezie DVD mmetụta na-aga ịbụ mma karịa Michael otu.
Mgbe ahụ, fanye a ide DVD diski dị ka D5 ma ọ bụ D9 n'ime gị DVD mbanye na pịa "Ọkụ". Mgbe ahụ a na-ere ọkụ Ohere dị ka n'okpuru image ga-egosi n'elu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmepụta otu ISO oyiyi faịlụ ma ọ bụ DVD nchekwa maka inwekwu ndabere na kọmputa gị, Biko nakwa ego nhọrọ. N'ikpeazụ, see Ọkụ ka a mfe DVD onye na-elekọta ndị ọzọ.
Atụmatụ: Ọ bụrụ na gị DVD oru ngo karịa 4.7G (a nkịtị D5 ikike) na ị na-adịghị a DVD9 diski (7.9G), dị nnọọ fanye a DVD5 diski na-ahọrọ "kwesịrị ekwesị diski" nhọrọ. Wondershare DVD Creator Ga-eme ka a itule n'etiti video àgwà na file size, na gị video faịlụ ga-akpaghị aka resize dabara a DVD5 diski.
Ekele! Dị nnọọ ugbu a, ị na-mere a DVD diski. Ezigbo mfe, nri? Ina malitere ugbu a!